Indlela yokudala isu elingcono kakhulu le-backlink yewebhusayithi yakho?
Lesi sihloko senzelwe ukuphendula impendulo kwenye yemibuzo evame ukubuzwa njalo "Indlela yokubuyisela emuva iwebhusayithi?" Amasu amaningi wokwakha izixhumanisi asivumela ukuthi sihlanganise isixhumanisi kwezinye izingosi ezihlobene niche. Nokho, akuzona zonke ezingaziwa ngokuthi i-organic. Eqinisweni, ayikho isu elilodwa lokugcina isakhiwo esakhiwe kuphela ngezindlela eziphilayo. Kwezinye amawebusayithi, isu elilodwa linganikeza imiphumela emihle ye-SEO futhi inikeze amathuba okuzwakalisa amahle. Indlela efanayo kwabanye ingabonakali idumela elivumelekile noma elibiza umkhiqizo.
Njengoba isikhathi siqhubeka, amasu okukhiya ama-link ahlukene ajwayele ukubheka njengento ephansi kakhulu. Amanye amasu okukhiqiza ukuxhumanisa angasebenza kahle okwesikhashana, bese abasebenzisi babheka isimo sokushintsha futhi amasu akho kufanele ashintshe.
Indlela yokuhlela isu lakho sokwakha isixhumanisi?
Ukwakha isu lakho lokuklama isixhumanisi, udinga ukubheka nxazonke ngecebo elihlukile ikakhulukazi kumakethe wakho emakethe. Hlola bonke ukuthi baqonde ukuthi yiziphi ezisebenzela kangcono ibhizinisi lakho le-intanethi. Hamba ngalokho okusebenzayo futhi uzame imibono emisha kanye. Kuhlale kungukudla kokuthola amasu amaningi wokwakha amaxhumanisi wokuwina njengoba kukunika ithuba lokudala iphrofayili yokuxhumanisa yemvelo. Njengoba imakethe yedijithali iyinkimbinkimbi eguquguqukayo njalo, kuyoba nengqondo ukuqhubeka uzama izindlela ezintsha.
Kungani kuyingozi ukusebenzisa izinhlelo zokwakha izixhumanisi?
Namuhla, kunamathani ezinhlelo zokwakha izixhumanisi ezenzelwe ukukhipha imali yakho. Bathembisa ama-webmasters ukwakha amakhulu ezinkulungwane zama-backlink kusuka kumasayithi aphezulu ahloniphekile esikhathini esifushane. Abantu abanokuhlangenwe nakho ekuthuthukisweni kwenjini yokusesha bazi ukuthi akunakwenzeka futhi kuzwakala kuhle kakhulu ukuba yiqiniso. Eqinisweni, inqubo yokwakha isixhumanisi kuthatha izinyanga futhi idinga ukusebenza kanzima okuningi. Ngisho noma uhlelo lokwakha isixhumanisi se-spammy lusebenza, okwamanje, iGoogle izoyibona futhi ihlasele, noma ingabe ifake kabi isayithi lakho ngezigwebo ezinzima. Yingakho udinga ukugwema izinhlelo ezinjalo futhi ugxile kumaqhinga wokuqamba ama-organic links.
Ama-backlink e-organic afanele!
Ama-backlink ezemvelo yizixhumanisi ozithola ngaphandle kokucela umuntu ukuthi abeke isixhumanisi kusayithi lakho. Njengomthetho, uthola izixhumanisi ezinjalo ngaphandle kolwazi lwakho. Isebenza kalula kakhulu. Isibonelo, uthola isihloko oyithandayo futhi uxhumanise kuso kusayithi lakho. Kufanele uqaphele ukuthi i-Google ithanda izixhumanisi zemvelo kanye namawebhusayithi okuvuza awakhiphe ngezinga eliphakeme ekhasini lekhasi lokusesha. Yingakho lolu hlobo lwezixhumanisi luphephile kakhulu. Ungahle uqiniseke ukuthi angeze ahlaziywe yi-Google.
Isixhumanisi sokuxhumanisa esisebenza ngokwaso
Wonke umnikazi webhusayithi uhlola isu lokuklama lokuxhumanisa elingasebenza ngaphandle kokunaka. Uma ungathanda ukuthola isu elingadingi umsebenzi wakho oqhubekayo ngokuthola isixhumanisi ngasinye, ukubhuloga kuyithuba elihle kakhulu kuwe. Konke okudingayo ukudala ibhulogi ngokususelwa kusihloko sakho sembonini bese uthumela ngokuqhubekayo ama-athikili ahlangene azosiza abasebenzisi. Uma ungakwazi ukunikeza abasebenzisi okuqukethwe okuzuzisayo, bazoxhuma kuma-athikili wakho futhi badale izixhumanisi eziphilayo ezingaphezulu nakakhulu kuwebhusayithi yakho Source .